Iwo akanakisa manomano eiyo Magetsi Khibhodi yeiyo Pro Pro | IPhone nhau
Iwo akanakisa manomano eMicrosoft Keyboard yeiyo iPad Pro
Luis Padilla | | iPad Pro, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Iyo YeMagetsi Khibhodi inouya yakagadzirira kubatana kune yako iPad Pro uye wotanga kuishandisa, isina zvinongedzo kana mamwe marongero, asi pane akateedzana sarudzo idzo dzinogona kugadzirirwa kuti dzigadzirise mashandiro ayo pane zvaunofarira.
Iyo tekinoroji yakavanzwa pasi peMicrosoft Keyboard inonakidza, sekureruka kwayo kwekushandisa. Haufanire kubatanidza chero chinhu, haufanirwe kumisikidza chero chinhu… ingo "namatidza" iyo iPad Pro uye tanga kuishandisa. Asi pane zvimwe zvinhu izvo zvechokwadi iwe zvaungade kukwanisa kugadzirisa kuita kuti mushandisi awedzere kuve nani. Kana iwe uchibva pakushandisa MacBook ine trackpad yayo, unogona kunge watove nezvimwe zvakaipa zvaungade kuti ugone kuramba uchichengeta nechinhu ichi chitsva uye chisina kumisikidzwa nekutadza. Muvhidhiyo iyi tinotsanangura tsananguro dzakanakisa dzaungashandisa neMagic Keyboard iyi:
Iwe unosuwa iyo Esc kiyi? Zvakanaka, kunyangwe pasina chakakosha chaihwo kiyi, unogona kuchigadzirisa mune imwe kiyi. Isu tinotsanangura kuti se inogona kugadzirisa mashandiro emakiyi akakosha yeMagetsi Chinyorwa.
Iyo keyboard backlight inozvitarisa zvichibva pane ambient mwenje, asi unogona kugadzirisa padanho rekutanga pane iyo system yacho pachayo inogadzirisa.
Iwe unoda here kushandisa zvigunwe zviviri kuti ubate kurudyi? ¿Unosarudza kubata uye haufanire kumanikidza iyo trackpad kuti uite chiito? Iwe unoda kushandura iko kunongedzera kwemupumburu? Zvese izvi zvinogoneka uye tinokuratidza kuti sei.
Resize pointer, chijekese nemhando yepamusoro yekusiyanisa kana kuchipa kubata kwevara
Shandisai virtual on-screen keyboard Kunyangwe iyo panyama keyboard yakabatana, zvinogoneka uye isu ticha tsanangura kuti sei.
Kune vakawanda "Pro" vashandisi iwe unogona shandisa iyo "yakazara yekuwana" modhi nemamwe mapfupi ekhibhodi uye chengetedza yako iPad zvachose kubva kubhodhi.
Mushure meiyi ongororo yeaya ese eMagetsi Khibhodi kodhi yekugadzirisa sarudzo, zvimwe zvakavanzika pasi peimwe sarudzo yekumisikidzaChokwadi iwe uchawana imwe yawanga uchishaya, kana iyo iwe yausingazive uye inokodzera iwe segirovhosi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iPad Pro » Iwo akanakisa manomano eMicrosoft Keyboard yeiyo iPad Pro
Inogona kushandiswa neiyo 11 iPad Pro 2018 ”?
Iyo Yemagetsi Khibhodi ine Trackpad inoenderana ne11 12,9-inch uye 2018-inch iPad Pro.
Apple ekunze mahedhifoni anogona kunzi AirPods Studio
Iyo itsva watchOS 7 yaizotarisa zvishoma pane hutano hwevanhu